Amagama evidiyo - TheComparison
🎮 Umuntu 4: Dansa ubusuku bonke 【Buyekeza futhi ulande ✅】
I-Electrical Disorder Persona 4: Dancing All Night inguqulo yakamuva ye-RPG yakudala ka-2008 ehlonishwayo, i-Persona 4, futhi njengoba isihloko siphakamisa, akuyona i-RPG, kodwa igeyimu yesigqi. Akuwona umqondo omubi nakancane - Izihloko zabantu ...
🎮 fifa16 【Buyekeza futhi ulande ✅】
i-streak engahluliwe Ibhola likanobhutshuzwayo! Ngalelo nothi lesasasa elilenga emoyeni, ngivumele isikhashana sokucaca. I-FIFA wumdlalo onzima ukuwukala. Kuyinhlanganisela yeminyaka embalwa yezici nezindlela, zonke ezilungiswayo futhi zibuyekezwa ngamadigri ahlukahlukene nge...
🎮 Blood Bowl 2 【Buyekeza futhi Ulande ✅】
Ibhola, liphi ibhola? Bengisele ngama-touchdown amabili futhi bebengakangeni engxenyeni yami yenkundla, kodwa bengizohlulwa. Emidlalweni edlule ngokumelene nama-elves amnyama, ama-dwarve, nama-high elves, benginethemba lokuthi ngizohlanganisa abadlali abaningi abangabantu eduze kwe-ogre yami, ukuze...
🎮 I-Disgaea 5: I-Vengeance Alliance 【 Buyekeza futhi Ulande ✅ 】
Cishe into enhle kakhulu. I-Disgaea: Ihora Lobumnyama manje selikhule ngokwanele ukuthi lingathathwa njengelakudala le-SRPG. Kusengumdlalo odume kakhulu kukhathalogi ekhulayo ye-Nippon Ichi Software, isihloko sethula abadlali ku-Underworld futhi ...
🎮 I-Disgaea 4: isithembiso esingenakulibaleka 【 Buyekeza futhi ulande ✅ 】
Izimpi zamaqhinga ezihehayo azikashintshi kakhulu, kodwa abalingisi abaningi kanye nokubhala okuhlekisayo kugcina i-Disgaea 4 ijabulisa. Uchungechunge lwe-Disgaea luhlale luhlanganisa izindaba ezimbi nezihlekisayo ezidlala...
🎮 Ubukhulu be-LEGO 【 Buyekeza futhi ulande ✅ 】
Lapho imihlaba ingqubuzana. I-LEGO Dimensions iqala ngendlela engajwayelekile: ikucela ukuthi ungadlali. Ngemuva kweminye imisebenzi emifushane neyesikhashana kugeyimu, i-Dimensions iyaphuma bese ikucela ukuthi udedele isilawuli futhi wakhe (usebenzisa izitini zangempela ze-LEGO) ingosi...